नेपाल आउने पर्यटकको गन्तव्य भारत बनाउन भारतीय मिडियाले नकारात्मक समाचार प्रसारण गरे – Tourism News Portal of Nepal
नेपाल आउने पर्यटकको गन्तव्य भारत बनाउन भारतीय मिडियाले नकारात्मक समाचार प्रसारण गरे
टासी लाक्पा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, टान
नेपाल आउने पर्यटक भारतमा २०१५ मा गएको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण नेपालको पर्यटन व्यवसाय निरन्तर ओरालो लागेको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपालमा आउने पर्यकटको संख्या ४० प्रतिशतले घटेको छ । भूकम्प गएपछि विशेष गरी भारतीय मिडियाले नेपालको विषयमा धेरै नकारात्मक समाचार प्रसारण गरे ।
जुन प्रचारलाई नाकाबन्दीमा समेत निरन्तरता दिइयो । यसो गर्नुको कारण नेपाल आउने पर्यटकको गन्तव्य भारत बनोस् भन्ने थियो । र, यस मामिलामा उनीहरू सफल भए पनि । नेपालमा पर्यटकको संख्यामा ४० प्रतिशतले ह्रास आउँदा सोही समयमा भारतमा ३० प्रतिशत पर्यटक बढेका छन् ।
२०१४ सम्ममा आठ लाख पर्यटक नेपाल आइरहेकामा हाल पाँच लाख ५० हजारको हाराहारीमा मात्र पर्यटक आइरहेका छन् । यसमा नेपाली मिडियाले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । भूकम्पको क्षति, असर, परकम्पन, पर्यटकीय भौतिक संरचनामा क्षति, त्यसले पर्यटन व्यवसायलाई पारेको प्रभाव आदिका बारेमा नकारात्मक समाचार मात्र सम्प्रेषण भयो । जसका कारण अझै पनि नेपालमा त्यस्तै संकट छ भन्ने विदेशीको दिमागमा बसेको छ ।
राज्यले दायित्व बोध गरेन
नेपालको पर्यटन व्यवसाय जुन रूपमा चल्नुपर्ने हो त्यसअनुरूप चल्न सकेको छैन । विदेशबाट बर्सेनि १०/१५ लाख पर्यटक आउँदा बस्ने राम्रो व्यवस्था छैन । सोहीअनुसारको एयरलाइन्स छैनन् । पर्यटनसहर बनेको छैन । अहिले जेजति छ सबै निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीमा सञ्चालन गरेका व्यवसायहरू छन् । खोइ राज्यले तीन/चार लाख विदेशी एकै ठाउँमा अटाउन सक्ने पर्यटकीय सहर बनाएको ? नेपाललाई प्रकृतिले दिएका केही हिमाली क्षेत्रलाई समेत निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ राज्यले ।
माथिल्लो तथा तल्लो डोल्पा, गोरखाको मनास्लु क्षेत्र, चुम उपत्यकालगायतका नौ क्षेत्रमा पदयात्रा तथा आरोहणका लागि सरकारले घोषणा गरेकोे निषेधित क्षेत्रले विश्वमा के सन्देश जाला ? चीनको स्वचालित क्षेत्रसँग जोडिएका ती निषेधित क्षेत्रलाई तत्काल खुला गर्नुपर्छ । चीन स्वयंले विश्व समुदायका लागि आफ्नो भूभाग खुला गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु तर्कपूर्ण छैन ।
हाल ०३३ को पर्यटन नीतिमा पर्यटन व्यवसाय चलेको हो । जुन अहिलेको समय सान्दर्भिक छैन । राज्यले ल्याएको नीतिकै आधारमा पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरू राखेर तत्काल काम गर्नुपर्छ । पर्यटन नीतिलाई अहिलेको समयानुकूल बनाउनुपर्छ ।
राज्यलाई फाइदै–फाइदा छ
पर्यटन व्यवसायीले सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । रोयल्टी र ट्याक्सबाट मात्र सगरमाथा चढेको एकजनाबाट ११ हजार डलर आउँछ । हिमाली क्षेत्रको निषेधित क्षेत्र खुला गर्ने, तीन/चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माण गर्ने, आधुनिक पर्यटन सुविधासम्पन्न सिटी बनाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेजस्ता कार्य राज्यले गर्ने हो भने यस क्षेत्रबाट ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ ।
अहिले बर्सेनि चार/पाँच लाख पर्यटन आउँदा पर्यटन व्यवसाय राज्यको तेस्रो आर्थिक स्रोत बनेको छ । १०/१२ लाख आए भने दोस्रो हुन्छ । १५/२० लाख आए भने यसले नै देशलाई धान्छ । ३० लाख आए भने नेपाल एसियाकै नमुना राष्ट्र बन्न सक्छ । देश आफैँ चल्छ । हामी आर्थिक रूपमा अरूमा निर्भर हुनुपर्दैन । निषेधित क्षेत्र खुल्ने, वैदेशिक उडान थप्ने र विदेशीको आगमनलाई सहज बनाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्याप्त स्टार होटेल बनाउने, सरकारी स्तरबाटै प्रचारप्रसार गरेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्वसामु पुर्‍याउने, विशेष कार्यक्रम र योजनाहरू बनाउने, पर्यटकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र संवद्र्धनमा ध्यान दिने, नीतिगत रूपमा समयानुकूल पर्यटन नीति बनाउने, पर्यटन सहर बनाउने मात्र हो भने पनि नेपालमा करिब १५ लाख पर्यटक भिœयाउन गाह्रो छैन । अझ बिस्तारै ३० लाख पुर्‍याउन सकियो भने बर्सेनि १२ खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रन्छ । यहाँ आउने एक विदेशी पर्यटकले चार हजार डलर खर्च गर्छन् । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य सरकारले लिनुपर्छ ।
९० प्रतिशत बुद्ध धर्म मान्ने थाई जनतालाई थाहा छैन बुद्ध जन्मिएको देश
थाइल्यान्डमा ९० प्रतिशत जनता बुद्ध धर्म मान्ने र उनीहरूमध्ये ८० प्रतिशतलाई बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल हो भन्ने थाहा नभएको समाचार पढ्दा अचम्म लाग्यो । त्यहाँ रहेका भारतीय ट्राभल एजेन्सीमार्फत थाई जनता भारत हुँदै नेपाल भ्रमणमा आउने गर्छन् । उनीहरू लुम्बिनीको भ्रमणमा समेत जान्छन् । भ्रमणबाट फर्किसकेपछि पनि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि हामी बुद्धको जन्मभूमि नेपाल पुगेर आयौँ । पहिलो उनीहरूमा लुम्बिनी भारतमै पर्छ भन्ने भ्रम छ ।
अर्को नेपाल भारतकै एक हिस्सा हो भन्ने । जीवनमा एकपटक बुद्ध जन्मिएको देश नपुगे आफ्नो मनोकांक्षा पूरा नहुने ठान्ने थाई जनतालाई बुद्ध जन्मिएको देशबारे थाहा नहुनु जति ठूलो बिडम्वना अर्को हुनै सक्दैन । जीवनमा एकपटक बुद्ध जन्मिएको देश आउन चाहने त्यहाँका जनताले बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् र नेपाल छुट्टै देश हो भन्ने मात्र थाहा पाएमा उनीहरू सीधै नेपाल आउँछन् । नेपालबारे बुझ्छन् । अन्य पर्यटकीय स्थलबारे थाहा पाउँछन् । त्यहाँ घुम्छन् । यसबारे सोच्ने कसले ? थाइल्यान्डको प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै पर्यटन व्यवसाय हो । त्यहाँ बर्सेनि दुई करोडको हाराहारीमा पर्यटक जान्छन् ।
हामी प्राकृतिक सुन्दरताले थाइल्यान्डभन्दा धनी छौँ । तर, पनि हामी बर्सेनि २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्दैनौँ । हामीलाई प्रकृतिले दिएको उपहारको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । किनकि नेपालको विकासमा यहाँ कसैलाई चासो छैन । नेता सत्ता र कुर्सीको खेलमा लागेका छन् भने जनता कसरी दैनिक गुजारा चलाउने भन्नेमा । प्रशासन र कर्मचारी जागिर खाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेपाल पर्यटन बोर्डले जुन काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको छैन । भनौँ भने बोर्ड पूर्ण रूपमा असफल छ ।
राम्रो पर्यटन नीति ल्याउन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै भेला, छलफलमूलक कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । बोर्डसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई उचित ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा लागेका, हिमाल, कुनाकाप्चा थाहा भएका व्यक्तिलाई बोर्ड सदस्य बनाउन सकिएको छैन । नियुक्ति गर्दा विज्ञ मान्छे छनोट गर्नुगर्नेमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा छनोट गरिन्छ । पर्वतीय पर्यटन बुझेको मान्छे बोर्डमा हुनुप¥यो नि । कुर्सीमा बसेर भाषण छाँट्नेको के काम ? कुर्सीमा बसेर नीति बनाउने त नेपाल सरकार छँदै छ नि ।
नेपालमा पर्यटन विश्वविद्यालय
हामी केवल विगत र वर्तमानको समीक्षामा रुमल्लिएर सुन्दर भविष्यको कोरा कल्पना मात्र गर्छौं । काम कम र भाषण बढी छाँट्दा छाँट्दै जिम्मेवारीमुक्त हुने समय आउँछ । अनि गरौँला भनेको समय नै सकियो, उसले गर्न दिएन, पाइएन भन्दै पन्छन खोज्छौँ । पछिल्लो समय हेर्नुस् त कुलमान घिसिङको पहलमा राजधानी लोडसेडिङमुक्त भएको । आखिर गरेपछि त हुँदोरहेछ नि । हुनुपर्ने त इच्छाशक्ति रहेछ । त्यसैले हामीले आफ्नो स्थानबाट आफूले पाएको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नुपर्छ । रिजल्ट आउने काम गर्नुपर्छ । नेपाल आफैँमा एउटा पर्यटन विश्वविद्यालय हो ।
तर, अहिलेसम्म यसलाई संस्थागत गर्न नसकिनु जतिको ठूलो विडम्बना अरू के नै होला र ? यहाँ विदेशी पढ्न, थेसिस लेख्न, प्राकृतिक सम्पदाको अध्ययन गर्न आउँछन् । उनीहरू यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, रमणीय वातावरण र प्राचीन सम्पदा देखेर आएका हुन् । र, उनीहरू आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्कन्छन् । खोइ यसलाई संस्थागत गर्न सकेको ? चीन, स्विट्जरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, हङकङ, मलेसियाजस्ता देशले कति फड्को मारिसके । तर, हामी भने झन् पछाडि धकेलिँदै छौँ । नेपालले विश्वकै नमुना पर्यटकीय विश्वविद्यालय बनाउन सक्छ । मैले यस विषयमा बहस सुरु गरको छु ।
पर्यटन विश्वविद्यालय एउटा कोठाभित्र विद्यार्थी कोचेर, उनीहरूलाई घोकाएर सैद्धान्तिक ज्ञान दिने खालको होइन । फिल्डमा लगेर अनुभव सँगाल्दै सिक्न पाउने खालको हुनुप¥यो । ता कि एउटा पर्यटनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पर्यटकसँग जोडिएका सबै ज्ञान अनुभवद्वारा हासिल गर्न सकोस् । नेपालको विषयमा आँखाले दखेर सिकेका कुरा उसले जहाँसुकै गएर पनि वर्णन र व्याख्या गर्न सकोस् । जसका लागि विश्वविद्यालयभित्र पर्यटकलाई चाहिने सबै विषय र गतिविधि समावेश गरिएको हुनुपर्छ ।
जस्तो इन्डोर आइस क्लाइम्बिङ, स्केटिङ गर्ने ठाउँ, आउटडोर र क्लाइम्बिङ गर्ने ठाउँ, स्की खेल्ने ठाउँ, स्काई फ्लाइङ, हाइकिङ, ट्रेकिङ गाइडजस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै तालिका समावेश गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा संसारभरको पर्यटन चल्नुको कारण र पर्यटन गुरुयोजना निर्माणको विषयमा समेत अध्ययन हुनुपर्छ । जसलाई सबै ज्ञान छ उसले न आफ्नो देशको पर्यटनबारे अरूलाई बुझाउन सक्छ । खोइ यसतर्फ हामीले सोचेको ?
यहाँ आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरिन्छ । गर्ने आर्थिक क्रान्ति होइन । गर्ने त आर्थिक विकास पो हो । क्रान्ति गर्ने नै हो भने पर्यटन क्रान्ति गरौँ न । अनि आर्थिक विकास कसो नहोला । हामी आफूसँग भएको स्रोत, साधन प्रयोग गर्न नसक्ने । अनि रेमिट्यान्स र ट्याक्स बढाएर क्रान्ति गर्ने सपना देख्ने ! हामीसँग भएका सम्पदाको सदुपयोग र परिचालन गर्दै राज्य संयन्त्र चित्तदत्त भएर पर्यटन विकासमा लागोस् त । नेपाल कहाँबाट कहाँ पुग्छ । नेपालको आन्तरिक पर्यटन राम्रो छैन । नेपालीसँग पैसा छैन । आन्तरिक पर्यटनले पोखराको पैसा काठमाडौं, काठमाडौंको लुम्बिनी, लुम्बिनीको चितवन जाने हो । त्यसैले हामीले फोकस विदेशीलाई नै गर्ने हो । पर्यटनलाई मात्र जोड दिएर अन्य विकासमा सम्भाव्यता बोकेका पूर्वाधारलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । पर्यटनसँगै कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको सम्भाव्यता पनि नेपालमा उत्तिकै छ । यी तीन कुरालाई सँगसँगै अघि बढाउँदै लाने हो भने अबको १० वर्षभित्र देशको मुहार फेरिने निश्चित छ । (कृष्ण आचार्यसँग गरेको संवादमा आधारित)